Amaanka xaafadaha soo galootiga Stockholm oo laga dayriyay | Somaliska
Xaafadaha ay ku badanyihiin soo galootiga ee magaalada Stockholm ayaa laga dayriyay amaankooda. Sanadkii la soo dhaafay ayaa keliya xaafadaha Rinkeby iyo Kista ee ka tirsan Stockholm waxaa booliska la war galiyay 153 dhac loo geystay dukaamada. Ganacsatada ku nool xaafadahaas ayaa ka waramay in ay noloshooda qatar ku jidho.
Tuugada dhaca ka geysata xaafadahaas ayaa ku hubaysan hub iyo faasas. Waxay dhac u geystaan dukaamada yo mararka qaar guryaha shacabka. Markii aad wareysato dadka shacabka ah ee ku nool xaafadaha soo galootiga ayay ku soo xasuusinaysaa xaalada ka jidha Somalia.
Ganacsato badan ayaa sheegay in ay isaga guureen xaafadahaas sababta amaanka awgeed. Horay ayaa xaafadaha Rinkeby iyo Tensta waxaa isaga guuray hay’adaha dowlada iyo Bankiyada. Dhacdooyinka amaan darada ee ka jira xaafadaha soo galootiga ayaan keliya ku koobnayn dhaca dukaamada balse waxaa sidoo kale jira rabshado soo noqnoqday iyo dambiyo kale sida kufsiga.
Waa dhacdooyin xun laakiin saxaafadda wadankaan xataa aad ayey uga badbadiyaan amaanka xaafadaha ay soo galootigu ka degen yihiin Stockholm iyo Malmö. Marka lama xigan karo kuwaas waxaa a qas badan Göteborg oo dadkana waliba lagu dilaa had iyo jeer xataa Soomaaliduu lagu dilay. Kuwaas ha arkeen gangeestaradii dadka nafta u keeneen. laman soo xigan karo kuwaas mucaaradka ku ah soo galootiga. Swden hadaad sharci weyn xataa qaadato soo galooti bes ayaa laguugu wacayaa waa mida uu ka sheegay ciyaaryahanka reer Bosnia ee Ibraahimovik.
wa arinlaga xumaado somalidu qayb ayey katahay inkastoo looga badanyahay rabshadahaas oo carab iyo turky iran ay u badanyihiin waxa kalo jira kabadbadin iyo buun bunin lagu sameyey sogalotiga si talaabo loga qaado wana midibkala sooc kajira guud ahan wadankan
War shekadaas wa laygadaranyahay an maa moog in aan sogalooti ahay war yaawar kahaayo arinta sharciga swedan albaada ayay xiratay war jimcaalo iyo asxaabta somaliska iyo inta warkahayso sharciga wax halagasoqoro
asc kulli muslimiinta waa dhibaato anagoo magaceyna soo galooti yahay oo markii horeba ul booc naloogu kutubayey hadii ceeb naloo helay oo aan kow ka noqonay amaandaro soomaali iyo carab waa isku macno meeshaan waa soo galooti waxaan dhihi lahaa dadku ha arkaan wadada fiican hana maraano wax rabshad iyo ceeb ka fiican ayan ka qabsan karnaa wadankaan hana lays wacyi geliyo oo ha leysu caqli caliyo maadama aan mu noolnahay wadankaan waa in aan sharaf ku joognaa wa bilaahi towfiiq
Asc asaxaabey qof hadii balanti dhiiga loo soo diro uu qalad u arko warqada loogu balaminaaye oo uu waco loo yarkii uuna ka qaban waysanyahay maxaa xal u ah hadaad fikir i dheertihiin ii soo jawaaba
Oo uuna balantii tagin oo macquul ma tahay in balan labaad loo soo diro haduu wicida badiyo
Madka sxb waxaan ku dhihi lahaa u faahfaahi sababta aad u tagi weysay , ka dibna waxaan rajeeynaa in eey mar kale ku wici doonaan. Sxb waxaan u maleeyna in asxaabta labada sana aad aheeyd, maxaa ka cusub arintaada goormee ayeey ku soo direeyn dhiiga. sxb warkaada aan helno. warbixinta ha les dhaafsada sxbyaaal. wcs
waa mahadsan tahay jimcaale markii wabkada dad aqrista badeen ayaad iska daysay inaad soo galiso qoraalo badan mideeda sxbow waan daganahay xafadaas waxa u badan ee wax dhaca waa carab iyo qoxooti badan uku yaraal 2 wiil ayaa lasocoto somalia ah kuwa wax dhacayo marka ma aha in ladhaho somalia ayaa wax dhacdo mahadanid
Madka waxsaas ah kama waramo laakin qof isagoo maqan loosoo direy dhiigii oo ladhahay wakhtigii markuu soo dhawaadey intii laiska aamusey bsri oo kalle lawacay oo ladhahay wuu xanuunsanaayaa qofkii ee tidkalle haloosameeyo oo loosoo direy balan kalle adna xal lee keen. Makuusoo jawaabeen walaalow madka dadkii aan isla dhibaneen aa kujirtey wallalo awguuriyo dadka kaa dambeeyana usoo duccee.